Ungayifaka kanjani i-Instagram kuTok Tok | I-RoidHub
»Ungayifaka Kanjani i-Instagram kuTik Tok
Ungayifaka kanjani i-Instagram ku-Tik Tok
4.4 / 5 ( 89 amavoti )
I-Instagram yayingumugqa wokuqala wesizukulwane esisha kuze kube yilapho i-TikTok craze isusa leso sihloko. Uyazi ukuthi iphrofayili ye-Instagram ingafakwa ku-akhawunti yakho yeTikTok? Ngakho-ke sizokutshela ukuthi ungangeza kanjani i-Instagram kuTok Tok.
Amapulatifomu amabili abamba kakhulu intsha yangesikhathi athola izakhi ezithile eziqondene nesikhulumi ngasinye. Ngayinye inezimpawu zayo namandla. Uma uthatha isinqumo sokudela esisodwa ngenxa yabanye. Kunethuba elihle lokuthi uphuthelwa kakhulu ngokungasebenzisi elinye.
Ungayifaka kanjani i-Instagram kuTok Tok?
Ungayixhumanisa kanjani i-akhawunti Yesibili noma Yebhizinisi le-Instagram kuTikTok
Ungasusa kanjani ukukhipha i-Instagram kusuka kuTikTok
I-TikTok inketho yokuya kumavidiyo weselula amafushane futhi aqondayo. Lezi ziqeshana ezimnandi nezizenzakalelayo zingeneka kalula futhi zizilayishe kuhlelo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza luphatha zonke izinhlobo zokuqukethwe futhi likuvumela ujabule nganoma isiphi isikhathi ngokugeleza okungapheli kokuqeshana okumangalisayo nokuhlekisayo kweziqeshana. Konke ngokuya ngokunambitheka nokuthandayo.
Yize i-Instagram yafika ngaphambi kweTik Tok. Kulandela ifilosofi ehlukile yokwakhiwa kokuqukethwe nokwabelana. Ngezithombe zayo ezimangalisayo nezihlungi zevidiyo. Kuseyisiteji seprimiyamu sokuthuthukisa okuqukethwe nokwabelana.
Kodwa iTikTok kuphela yanele ukugcina ukuthi uzibophezele isikhathi esiningi esingapheli. Noma kunjalo, abantu bafuna ukunika isikhathi esithile ku-Instagram yabo. Ngakho-ke uma nawe ubuza ukuthi "ngiyifaka kanjani i-Instagram yami ku-TikTok yami?
Sizokuthatha ngenqubo. Yiba yifoni yakho ephathekayo ye-Android noma idivaysi noma i-apula le-Apple oliphethe. Impendulo yokuthi ungangeza kanjani i-Insta kwi-tik tok ilula.
Ungaxhuma izinhlelo zokusebenza zombili. Abanye abantu laphaya vele basebenzisa uhlelo lokusebenza lweTikTok ukudala izindaba ze-Instagram neziqeshana zesimo. Kodwa-ke, iningi alazi iqiniso lokuthi zombili lezi zinhlelo zokusebenza zingaxhunyaniswa khona ngqo endaweni yesikhulumi seTik Tok.
Ngaphambi kokuthi uqale ukuxhumanisa ama-akhawunti kulezi zinhlelo zokusebenza ezimbili. Kufanele wazi ukuthi zingama-application amabili ahlukene angawakho futhi asebenza izinkampani ezahlukahlukene kakhulu. I-Insta iphethwe yi-Facebook kanti iTik Tok yinkampani yase China.
Ukuze uxhumanise i-Instagram neTikTok, kuzofanela ufake zombili izinhlelo zokusebenza ocingweni lwakho. Njengoba ulapha. Usuvele unawo womabili ama-akhawunti. Manje usukulungele ukwenza inqubo. Ngakho-ke yindlela yokuxhumanisa i-Instagram neTikTok.
Lezi yizinyathelo. Benze ngokulandelana okunikeziwe futhi uzoba khona ngesikhathi.
1 Vula uhlelo lokusebenza lweTik Tok bese uthinta isithonjana sephrofayili. Kona ekhoneni elingezansi kwesokudla uma usuvulelwe uhlelo lokusebenza esikrinini sakho.
2 Manje thepha okukhethwa kukho kwephrofayela yokuhlela uma usungene esinyathelweni sokuqala.
3 Lapha ungabona inketho yokungeza amaphrofayili akho e-Instagram nawe-YouTube. Thepha kuthebhu yokwengeza i-Instagram.
Manje uzothathwa ungene ku-Instagram Login yakho. Gcwalisa ubuqiniso obufaka inombolo yakho yocingo, igama lomsebenzisi, noma i-imeyili, ne-password. Bese ucindezela ithebhu yokungena ngemvume. Uzoyiswa kuphrofayela yakho ngeTikTok.
Manje thinta inketho ethi "Gunyaza" ukuvumela i-akhawunti yakho ukuthi ifinyelele i-akhawunti ye-Insta.
Le yindlela yokufaka i-Insta kwi-tik tok kufoni yakho ephathekayo. Manje ungabelana ngendalo yakho yevidiyo kufoni yakho ngqo ku-Insta kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-TikTok. asikho isidingo sokuhamba ngendlela ende evuselelayo yokushintsha phakathi kwezinhlelo ezimbili.
Ungakwenza lokhu futhi. Abantu abazama ukuxhuma ama-akhawunti abo e-Instagram noma ama-akhawunti abo e-Instagram wesibili bangase babhekane nezinkinga ezithile. Okuvame kakhulu ukuthi yinkinga yephasiwedi engalungile. Kulula ukulungisa. Ngokwenza lokhu, indlela inezinyathelo ezilula ezilandelayo.
Iya ku-akhawunti yakho Yesibili noma yebhizinisi ku-Instagram yakho.
Thepha okuthi 'Dala iphasiwedi yale akhawunti'
Nikeza iphasiwedi kuleyo akhawunti.
Manje sebenzisa lobu buqiniso ukuxhuma ku-Instagram kusuka kuTikTok. Ngakho-ke yindlela yokuxhumanisa i-Instagram neTikTok kusuka kubhizinisi noma i-akhawunti yesibili ye-Instagram.
Nganoma yisiphi isizathu ufuna ukuhlukanisa la ma-akhawunti amabili yini okufanele uyenze? Kulokhu, kuzodingeka ukuthi uphinde inqubo esetshenziswe ekuqaleni.
Lapha esikhundleni sokucindezela inketho "yokungeza i-Instagram". Kuzofanela uthephe inkinobho ethi "Unlink". Ngemuva kwalokho uhlelo lokusebenza lweTikTok luzosusa ngokuzenzakalelayo imininingwane yakho ye-Instagram.
Ngakho-ke ngokusebenzisa lezi zinyathelo ukuthi ungangeza kanjani i-Instagram ku-Tik Tok kuba ngumsebenzi olula. Manje kwenze futhi wenze impilo yakho ibe lula.
Ngifaka kanjani i-Instagram yami ku-TikTok yami
Ungayifaka kanjani i-Insta ku-Tik Tok
Ungayifaka kanjani i-Akhawunti Yebhizinisi le-Instagram ku-TikTok
Ungayengeza kanjani i-Instagram kuTikTok